Maxay Shabaab ka yiraahdeen Weerarkii Muqdisho & goobihii bartilmaameedka u ahaa? | Maxay Shabaab ka yiraahdeen Weerarkii Muqdisho & goobihii bartilmaameedka u ahaa? | Hal Sheegaha La Hubo
Maxay Shabaab ka yiraahdeen Weerarkii Muqdisho & goobihii bartilmaameedka u ahaa?
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyadda weerarkii xooganaa ee caawa ka dhacay magaalada Muqdisho,
Ciidamada DF Soomaaliya ayaa soo gaba gabeeyay howlgalkii lagula dagaalamayay weerarkii Shabaab ay ku qaadeen xarumo badan oo magaalada Muqdisho ah inkastoo Laakiin War kasoo baxay Shabaab ayaa lagu sheegay in weerarkaas uu ahaa mid meelo kala duwan ay la bartilmaameedsadeen.
Qoraal kasoo baxay Shabaab ayaa lagu yiri “Ciidamo aad u hubeysan oo ka tirsan Xarakada Shabaabul ayaa caawa maqribkii howlgal ballaaran ku beegsaday xarumaha iyo isku imaatinnada Dowladda Federaalka ee ku yaalla goobaha aadka loo ilaaliyo ee magaalada Muqdisho”.
Al- Shabaab oo Warkaan ka baahiyay Idaacada Andalus ayaa soo xiganeysay sargaal Shabaab ah oo weerarkii Muqdisho ka qeyb qaadanayay.
Meydka mid ka mida Dableydii Al-Shabaab oo ku lebisan Dareyskii ugu dambeeyay ee ciidamada
Shabaab oo faah faahiyay qaabkii uu weerarka udhacay ayaa yiri “Weerarka waxaa lagu daah furay Camaliyaat Istish-haadi ah oo lala beegsaday xarumo gaar ah ka dibna ay ciidamada mujaahidiinta waxey ku faafeen xarumaha cadowga” .
Idaacadda Al-Shabaab ayaa sidoo kale sheegtay in xarumaha la bartilmaameedsaday ay muhiim u ahaayeen dowlada.
Sidoo kale, Shabaab ayaa sheegtay iney bartilmaameedsadeen hoteelka dhawaan la daah furay ee Doorbin (EX Baar Fiyaat).
“Mid ka mid ah Ismiidaaminta waxaa lagu beegsaday Hotelka lagu magacaabo Dorabin ee ku dhow Xarunta Sirdoonka ee Habar-Khadiijo halkaas oo ay ku caweynayeen saraakiisha iyo madaxda dowlada, Waxaana ka dhashay qasaare culus oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Arrintu si kastaba ha ahaatee, Dowlada Soomaaliya ayaa la filayaa iney faah faahin ka bixiso qaabkii uu weerarkaas u dhacay iyo khasaaraha ka dhashay.